कोरोना भाइरस के हो र यो बाट कसरी बच्ने? " अजिव पौडेल" - लण्डन काठमाडौँ
कोरोना भाइरस के हो र यो बाट कसरी बच्ने? ” अजिव पौडेल”
शिक्षाबिद तथा समाजसेवी
कोरोना एउटा भाईरस हो। भाइरस आफैमा जीवित बस्तु र निर्जीव बस्तु को दोसाध हो। यो आफ्नो अनुकुल जीवित बस्तु ( host) भित्र जीवित रहन्छ भने बाहिरी वातावरण मा निर्जीव बस्तु जसरी बिभिन्न आकार मा रहन्छ । कुनै भाइरस त बाहिरी वातावरण मा क्रिस्टल को रूपमा रहेका हुन्छन् ।
भाइरसको पनि धेरै प्रजातिका हुन्छन् । यसको आ आफ्नै खाले होष्ट हरु हुन्छन् । कोरोना भाइरस को वास्तविक होष्ट मानिस होइन तर ऊसको होष्ट बाट मानब शरीरमा प्रवेश पछि यो भाइरस ले आफ्नो अणुबंशाणिक
गुण नै परिवर्तन गरि मानब कोषमा भएका बिभिन्न प्रोटिनका यौगिक हरु मा भएका मोलिकुल मा बंश बिकाश गर्न सफल भयो । हालसम्म को अध्ययन मा छत्तिस भन्दा बढि मानब कोषका प्रोटिन मा यस्ले चाहिने यौगिक हरु खानाको रूपमा उपभोग गरेको छ। भाइरस लेआफ्नो अनुकुल वातावरण मा सयौँ सङ्ख्या मा फ्रागमेन्टेसन गर्दछ । यसको साइकल छोटो समयमै पुरा हुन्छ । जसले गर्दा छिट्टै मानब शरीरमा सङ्ख्या अनगिन्ती हुन पुग्छ ।
यो भाइरस मानब शरीरमा प्रवेश गर्ने लगत्तै सबै मान्छे मा आफ्नो बृद्धि बिकाश गरिहाल्ने र सबै सङ्क्रमित भइहाल्छन् भन्ने हुदैन । उसलाई अनिवार्य हुने बस्तु भनेको तापक्रम र मान्छे को भाइरस निरोधक क्षमता को कमी पनि हो । यस्तो अनुकुल वातावरण मा मात्र एउटा भाईरस शरीरमा छिरेर शरीरका कोषमा भयका प्रोटिन यौगिक मा
अनगिन्ती सङ्ख्या मा बिकाश हुन्छन् ।
भाइरस राइबो न्युक्लिक एसिड भयको सिङ्गल स्ट्याण्डर्ड यौगिक युक्त क्रोमोजमहरू ले बनेको हुन्छ भने मान्छे को कोषमा डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड ले बनेको डबल स्ट्याण्डर्ड यौगिक युक्त क्रोमोजम हरु रहेका हुन्छन् । यो भाइरस को पूर्ण जेनेटिक अध्ययन नगरिकन भ्याक्सिन वा औषधी बनाउन सकिदैन । यसका लागि संसार का हजारौं जेनेटिक बैज्ञानिकहरु लागि परेका छन् । यो सम्पूर्ण कार्य गर्न समय लाग्छ ।
त्यसैले हामीले तत्काल आफ्नो बचावट गर्न यो भाइरस को प्रसारण, बृद्धि बिकाश, हाम्रो शरीर मा भाइरस निरोधक क्षमता बढाउने खानेकुरा को ज्ञान लिने बिषय को अध्ययन र त्यसको प्रचार प्रसार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यो भाइरस लाग्न नदिनु सबै भन्दा ठूलो बुद्धिमानी हो।
यसको लागि अहिले संसार भरी गरिएको लक डाउन र त्यसको पूर्ण पालना गर्नु नै हो । यो रोग सङ्क्रमित सङ्गको लसपस र उसले छोएको बस्तु हरु को संसर्ग बाट मात्र सर्दछ।